Angeke esayibona imiphumela yakhe kaMatric obulawe yinyathi | News24
Angeke esayibona imiphumela yakhe kaMatric obulawe yinyathi
Durban - Njengoba iningi labafundi abebenza umatikuletshesni lilinde kuphume imiphumela yabo kuleli sonto, uSphamandla Sokhela, umfundi wesikole iSibukosezwe High eHammarsdale, yena angeke asayibona imiphumela yakhe.
Lo mfundi, 20, waKwaZulu-Natal ushone ngemuva kokupitshizwa yinyathi okusolwa ukuthi yeqe esiqiwini esiseduzane, ngesikhathi uSokhela eseholidini nomndeni wakhe e-Escourt emasontweni adlule. Ubekwe endaweni yakhe yokugcina ngempelasonto edlule.
OLUNYE UDABA:Abasolwa abathathu balahlwe elokubulala ngesihluku inyathi ebiza R8m
Umfowabo uSthembiso Sokhela uthe ucela amaphoyisa aphenyisise ukuthi le nyathi imupitshize kanjani uSphamandla.
Okhulumela amaphoyisa uLieutenant Colonel Zwane uthe kuvulwe idokodo esiteshini samaphoyisa ase-Escourt ngemuva kokushona kwendoda, 20, okusolwa ukuthi ibulawe yinyathi endaweni aseNtunda, Escourt.